Paul Shah – An Online Entertainment News Portal
March 9, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली फिल्ममा पुराना फिल्मका नाम राखेर फिल्म बनाउने कुरा त नयाँ होइन । फिल्मीकर्मीले सिनेमाको नामको पछाडि २, ३ जोडेर मात्र होइन, पुराना सिनेमाको नाम नै सापटी लिएर पनि बनाउँदै आएका छन् । […]
प्रेम गरेपछि किन लुकाउँछन् कलाकार
February 14, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- आज प्रेम दिवस । प्रेम दिवसलाई प्रेम गर्नेहरुको दिनको रुपमा हेरिन्छ । यसैले पनि आजको दिन प्रेम गर्नेहरुका लागि विशेष छ । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि प्रेम जोडी धेरै छन् । जसले प्रेम […]
फिल्म छाड्ने स्टार कि गर्ने ?
January 28, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कुनै पनि कलाकारले सिनेमामा काम गर्दा त्यसलाई स्टार मान्ने कि छाड्दा ? एउटाले छाडेको फिल्म अर्कोले हेर्दा उसलाई किन कमजोर मानिन्छ ? किन हेपेरे बोलिन्छ ? अहिले नेपाली सिनेमामा यस्तै देखिएको छ । […]
जब फिल्मीकर्मीले बोल्दा विचार पु¥याउँदैनन्
January 3, 2019 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- बजारमा कुनै कुरा विवादमा आयो भने फिल्मीकर्मी त्यसलाई मिडियाको दोष मानिदिन्छन् । मिडियाकै कारण खबर फैलिएको उनीहरु बताइदिन्छन् । तर, फिल्मीकर्मीले बोल्दै नबोलेको कुरा कसरी मिडियामा आउछ र ? आफू बोल्दा विचार नपुर्याउने अनी […]
पुराना सुपरस्टारको मेल कती आवश्यक ?
January 2, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेता राजेश हमाल र अभिनेता भूवन केसीविच हाइ हेल्लो त होला, तर दुश्मनी उस्तै छ । मौका परेको बेलामा भूवन केसी राजेश हमाललाई दिइएको महानायकको उपाधिमा प्रश्न उठाउन समय लगाउँदैनन् । उनी समय […]
स्टारहरुले नाफाको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
December 27, 2018 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेता प्रदिप खड्काले रोज फिल्मका लागि २२ लाख पारिश्रमिक लिए । २२ लाख पारिश्रमिक लिएको हिरोले सिनेमालाई नै बोक्ने मात्र होइन लगानी उठाएर निर्मातालाई सुरक्षित गर्न सक्ने हिम्मत पनि राख्नपर्छ । तर, यो सिनेमा […]
कलाकारको प्रेम सम्बन्ध, स्वार्थ अनुसार कि सार्वजनिक कि गोप्य
November 30, 2018 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अहिले एउटा खबर हट केक बन्दैछ । नेपाली फिल्मका सुपरस्टार हिरो अनमोल केसी र नयाँ अभिनेत्री सारा सिर्पाली प्रेममा रहेको खबर सार्वजनिक हुन थालेको छ । यो बिषयमा केसी र सिर्पाली दुबैले मुख […]
महंगा कलाकारमाथि महंगो लगानी, तर जोखिम कती ?
November 22, 2018 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- सिनेमा बनाउनु सामान्य कुरा रहेन । सिनेमाका लागि लगानी पनि सामान्य रकमले नहुने भयो । सिनेमाको छायांकन अगावै करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा हुने भयो । अझ बजारमा स्वघोषित स्टारहरुलाई लिने हो भने त छायांकन […]
पल र आँचलको सहयोग या हतारो ?
November 13, 2018 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपाली रंग पत्रकारहरुका लागि आइतबार र सोमबारको दिन तछाडमछाडमा वित्यो । करिब १० मिनेटमै फेरिएको ब्रेकिङ न्यूजले पत्रकारलाई हतारो पर्नु स्वभाविक नै थियो । ब्रेकिङ न्यूज १० मिनेटमा फेर्न सफल कलाकार थिए, […]
कलाकारको पारिश्रमिक वृद्धि, हचुवाको डिमाण्ड कि स्टारडम ?
October 26, 2018 sutraentertainment 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – नेपाली फिल्मका कलाकारको लाइफ स्टाइल हेर्दा अहिले त जो कोहीलाई पनि कलाकार बन्छु भन्ने सोच आउला । किनकी, कुनै कलाकार छैनन् जसको पारिश्रमिक सस्तो होस् । अब त ५० लाखसम्म पनि लिएको […]
स्टारकिडलाई के मिडियाले साथ दिन्छ ?
गायक प्रदिप रुपाखेतिको ‘चोट’ सार्वजनिक
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा केशव भट्टराईको नियुक्ति
‘क्याप्टेन’हेरेपछि प्रधानमन्त्री ओली ; अनमोललाई चिन्दिन तर इशान ‘बेस्ट प्लेयर’ हो
माधुरी,आलिया र वरुणको ‘घर मोरे परदेशिया’ ( भिडियो )
यस्तो भयो वर्षा र संजोकको विवाह पछिको पहिलो होली ( फोटो फिचर )
यस्तो भयो नेपाली सेलिब्रेटीको होली ( फोटो फिचर )
जब आलियाले दिपिकालाई किस गरिन्, ‘जी सिने अवार्ड २०१९’ मा सेलेब्रेटीको ग्लामर ( फोटो फिचर )
होलीको उत्सवमा फिल्मको प्रचार
‘केसरी’ रिलिज अघिनै अक्षयले गरे यस्तो खुलासा, भन्छन ‘पिक्चर अभी बाकी है’
aanchal sharma anmol kc barsha raut bhuwan kc celebrity gossip dashain tika deepa shree niraula gossip kollywood celebrity gossip kollywood gossip lates kollywood gossip latest kollywood gossip nepali actress Nepal Idol nepali film New Nepali Movie Paul Shah Pooja Sharma pradeep khadka pradip khadka prem Geet2Priyanka Karki Rekha Thapa samragee rl shah Samragyee Rl Shah